Ny 29 aogositra 2018 raha mbola niverina nanao fanaraha-maso tampoka tao amin’ilay mangazay ihany ny tompon’andraikitra dia akory ny hagagana fa indreo ny mpiasa maro be manivana zavatra efa simba ka teo niainga ny fepetra tsy misy hatakandro intsony.
Nakatona avy hatrany ilay mangazay ary noraofina avokoa ireo entana sakafo simba tao dia nopotehina tany ivelan’ny tanàna nodorana sady nalevina mba tsy ho azo raofina sy tsy hanimba ny tontolo iainana, hoy ny Talem-paritry ny varotra sy ny fanjifana ato SAVA, Atoa Be Christophe.
Tsy mba fahita firy aty SAVA izany atao hoe : ‘’SOLDE’’ na varoboba izany. Entana efa hita izao fa tokony hamidy haingana mba tsy ho simba na ho lany daty saingy naleon’ny tompony miafara amin’izao. Raha tsy sarona izy ireo dia ny mpanjifa indray no nizaka ny vokany.